Rondo (Ballymena) Twin Room - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguDesmond
Igumbi elinye labucala elikhoyo elineebhedi ezimbini ezingamawele. (Igumbi labucala elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi labucala elinebhedi enye ekhoyo kuluhlu lweRondo) Eli khaya likumgama wokuhamba ukuya kumbindi wedolophu yaseBallymena kunye neekhilomitha ezi-1 ukufikelela kuhola wendlela uM2. Iindwendwe nazo zinendawo yazo yokuhlala eneTV, iNetflix kunye neWIFI. Ixabiso libandakanya self-service sakusasa yelizwekazi. I-Rondo iye yaqinisekiswa yi-Tourism Northern Ireland.
Ndijonge ukwenza indawo elula yokuphumla, ekhululekile kwaye ecocekileyo. Iindwendwe ziqinisekile ukuba zilala ngoxolo ebusuku...igumbi lakho labucala linesitshixo emnyango. Iindwendwe zinegumbi lazo lokuhlala elinomabonakude kunye nesidlali seDVD
Indawo ezolileyo ngaphakathi kwemizuzu emi-2 ukuya kwi-Spar yasekhaya-imizuzu emi-3 ukuya kwi-Happy Vila Chinese kunye ne-Char bella. Malunga neekhilomitha ezi-3 ukuya kwihotele yaseTullyglass naseGalgorm. Imayile enye ukuya kwiM2 Motorway...indawo entle yokukhenketha yonke iNorthern Ireland.
Umbuki zindwendwe ngu- Desmond
Ndinobuhlobo kwaye ndiyakonwabela ukunxibelelana nabantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi. Ndiye ndahamba ngokubanzi kwaye enye yezona zinto zibalaseleyo ibikukuhlala nabantu basekuhlaleni kunye nokwamkelwa ngokufudumeleyo endikufumeneyo. Ndijonge phambili ekwenzeni okufanayo nakwiindwendwe zam. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye imibuzo malunga nantoni na, ndilapha ukuze ndikuncede.
Ndinobuhlobo kwaye ndiyakonwabela ukunxibelelana nabantu abavela kuzo zonke iinkalo zobomi. Ndiye ndahamba ngokubanzi kwaye enye yezona zinto zibalaseleyo ibikukuhlala nabantu base…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ballymena